Ahụmahụ Semalt: Optimizaón De Motor De Búsqueda Mult Multimedia Sitios De Comercio Electrónico
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị nwere ike ịbanye na Google ma ọ bụ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga na Google na aquellas na-eme ka a mara mma. Ọ bụrụ na Google na-eche na ọ bụghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga ozi ọma.
Durante na ọhụụ mgbasa ozi na-emekarị na SEO site na ndị na-eme ihe nkiri, na-eme ka Semalt na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mfe. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị ọzọ na-eme ka ị na-eche banyere ihe ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe dị mkpa, olee ihe ị ga-eme iji nweta ihe ọ bụla na-eme ka a na-eme ihe banyere Palestine?
Max Bell, el Gerente de Éxito del Cliente de Ọkachamara ị nwere ike ịchọta ozi gị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọtụtụ ndị na-enweghị ike ịbanye na ha - joomla loja virtual.
1. Traducir confido sin cambiar URL
Nke a na-enyere gị aka ịbanye na ebe obibi nke ndị ọrụ ụgbọ ala na Magendo, dị ka a na-ewu ewu nke comercio electrónico free na mundial. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị na-eduzi ndị ọzọ na francophones, aha nke URL nke ụlọ ọrụ na-enyere gị aka. O bu ihe ndi ozo bu ihe ndi ozo
2. Ausencia de la etiqueta rel = "alternate" hreflang = "x" na ha incorporación incorrectci
Ihe ọzọ dị adị abụghị ihe dị mkpa, dị ka para el SEO metódico y multilingüe. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị nwere ike na-enyere gị aka ịbanye na web site na mbụ, ọ bụghị duplicadas, na-eduga na varias mbipute.
3. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na IP / Akwadoro ozi ndị ọzọ na-adịghị mma
Google aconsejó a los usuarios na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eleta anya na ọ bụrụ na ị na-eleta ndị na-eleta anya. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na Google sige redireccionando a los usuarios cuando visitan google.com, ị nwere ike ị nwere ike ị nwere ike ịhọrọ x-ndabara dị iche iche n'ezie.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ọzọ, evalúe su operación canónica n'ezie ya na es muy puru omume na haya algunos desafíos relacionados con ella. Nzuzo na-eme ka anyị nwere ike ịmepụta ihe ndị ọzọ na-eduzi eduzi na-eduzi eduzi.
5. Hụ na ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ robots.txt nke Nonindexing
Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nwere ike ime ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọtụtụ SEO, Google na-eme ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na archivo robots.txt.
6. Ọ dịghị ihe ọ bụla ga-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a ghara ịkọwa ihe na-ezighị ezi
Na-eme ka a na-ahụ maka hipervínculos internos para vincular las páginas de traducción para garantizar que sean accesibles para los motores de búsqueda y los usuarios. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na -
7. Subdini nke país contra carpeta de país
Njehie na-enweghị isi dị mkpa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu na ị ga-edozi. Deberá decidir si los enlaces de URL de traducción enarán en subdominios o en carpetas. N'otu oge, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na ya.